buyekeza University - Higher education abroad for international
Ungakhohlwa discuss Ajou University
Umlando Ajou University uye wagcwala nezinselele ezintsha: liye ayivulwanga kuphela emingceleni amasha kwimfundo ephakeme Korea ngokwethula uhlelo double-degree namanyuvesi angaphandle ngokokuqala ngqá phakathi emayunivesithi Korean, kodwa liye landa njengoba omunye iyunivesithi okuholela iminyaka engamashumi amane kuphela selokhu yasungulwa.
Manje, Ajou silungele ukuthatha nesinye inselele. It is waphupha yayo "Ukusungulwa Second" ukuze lokhu kwabeka isisekelo elisonyakeni walo owodwa wokuhamba njengoba eyunivesithi ephambili futhi ukuba babe sombuso abaholi bomphakathi wethu beqiniso.
Through ukukhula ambalwa kanye eqa qualitative, sizibophezele okuvula inkathi 'Ajou Premium' nokushintsha izwe egameni Ajou kanje:
Okokuqala, Isibuyekezo University Uzoletha Amakhono Excellent, ngubani zisacindezela kokubili abafundi bona kanye wonke umphakathi.
Ajou University kuyosenza abafundi "Ikhono okusinda" emphakathini wethu ezincintisana ulwazi oluyisisekelo kanye nemfundo esiqinile majors zabo, le "Ikhono wokuhola" ukuze bakwazi ukuthola ukuthi bafunani ukuxazulula izinkinga bebodwa, futhi "Ikhono ophilayo obunobunye" abaphathelene nazo abanye nangenhlonipho kwehlukahlukana.
Okwesibili, Ajou University kuyoqinisa ubuholi bethu abacwaningayo futhi iholele indlela yokuba kokubili kwezemfundo umkhakha.
Isibuyekezo University Ingabe ukuphishekela "Ucwaningo evolutional" nge lokusungula Kuhlangana okusekelwe core amakghono "Ucwaningo omuhle" ngokusebenzisa ukuncintisana umsindo futhi onoguquko incentive uhlelo, futhi thina ngeke ukhiqize "Ucwaningo ngempumelelo"Imiphumela nge ngokubambisana phakathi izimboni, Academia, izikhungo zocwaningo, nezinhlangano zomphakathi.
Okwesithathu, Ajou University uyogcwalisa indima kanye nezibopho zethu ngokushintsha umphakathi kanye nokuvula enkathini entsha.
Sizobheka amakhono ethu ku "Ekwakheni capital social" zokuphila obunobunye, "Ngcono ukuhamba social" okuvumela ukuba abantu ukuhambisa langaphezulu ngokusekelwe iBhayibheli lithi ngemizamo yabo, futhi "Ulungiselela ubunye the Koreas" ngaphezu nokwelula okusemandleni ethu global.
Ukuze lo mbono uphumelele, the people of Ajou University will begin three “Pleasant Innovations.”
Ukuqamba uwukubonakaliswa ukuzimisela kwethu eqinile ukunqoba futhi ushintshe Isimo samanje, kokudala ikusasa ukuthi sinethemba. It is neither uphindaphinda lokho esiye abayenzile esikhathini esidlule noma ukulandela indlela abanye baye bathatha ngokushesha nje. It is okuvula imikhondo entsha sizithathe ngentshiseko.
Ikona emisha imvelo ukuze ngalokwakhako ukunqoba izinselele nathi; emisha ngokwethu, breaking kude futhi sishintshe izindlela zethu odlule lokucabanga futhi ukusebenza, kanye nezinye izinhlelo ngokwethu; futhi innovation social ngenxa yokuthuthukisa umphakathi wethu ngendlela umsindo kwezinhlansi izingxabano nezigaba.
Lezi izi Innovations Pleasant Futhi Kuyajabulisa ngoba siyajabula ukuba nizenze, kunokuba kokuba ebatshele ukuba ngabanye.
Lezi emisha ezimnandi by Ajou abantu kuyoholela emisha ezimnandi kulo lonke umphakathi wonke of the Republic of Korea.
Uma Thuthukisa Shanghai, umphakathi wethu izoshintsha kanye. Nalokhu ukuzethemba, akukho nemikhawuko isibindi sethu ukuze sibhekane nezinselelo esibhekene nazo, futhi intshiseko eqaphela ukuthi amaphupho ethu alupheli.
Sicela ukusekela isibindi futhi ukujoyina amabutho ngoba Innovations Pleasant by Ajou abantu.
buyekeza University, esungulwe ngo 1973 ngaphansi inkolelo “Asia eyunivesithi best for ekhulwini lama-21”, kuyinto ehamba phambili iriseshi yaseyunivesithi nge 10 amakolishi e Korea. Akhiwe Suwon, mayelana 30KM eningizimu Seoul, kubuyekeze ine 14,000 abafundi (9,000 undergraduate, 3,500 graduate, futhi 1,500 kwezinye izifundo).
Amandla ezinhlelweni Ajou ezifundweni futhi ucwaningo sixhomeke Engineering, IT, BT, NT, Kwesayensi Yezokwelapha, Business and International Studies. Ajou ubhekwa Lwezinhlelo zayo ezintsha international kanye ukwesekela okuqinile kulabo bafundi jikelele futhi uye ubambiswano ne phezu 200 emayunivesithi 58 amazwe. Kukhona anhlobonhlobo izinhlelo international at Ajou kuhlanganise umfundi kanye ubuhlakani Ukuhwebelana, esikoleni ehlobo international, Uhlelo ulimi Korean, njll. Abafundi International uthatha izifundo ahlinzekwa ngesiNgisi by majors ehlukahlukene. Thuthukisa Namuhla imayelana owamukelanayo 750 abafundi international ngonyaka.
Ngo 1971, when modernization and industrialization were under way in Korea, Korea and France entered into an agreement for the establishment of Korea-France Technology Junior College in order to exchange technology and culture through education. According to the agreement, Ajou Engineering Junior College, the forerunner of Ajou University, was founded in March 1973 by Yusin Institute established by Park, Chagn-won, the chairman of Yusin Express Tourism Co., Ltd. Starting as Ajou Engineering Junior College, Ajou College recruited 280 students during its first year from four departments, including Electronics, Precision Mechanical Engineering, Fermentation Chemical Engineering, and Industrial Management. The school was promoted to Ajou Engineering College a year later and produced its first graduates in 1997. Ngo 1997, Kim, Woo-jung, the chairman of Daewoo International, contributed his personal wealth to establish Daewoo Institute and took over Ajou University.
Uyafuna discuss Ajou University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa